Ve ianao ny orinasa na ny orinasa ara-barotra? Ary lazao ahy ny fanompoana?
Izahay dia orinasa izay efa manokana ao amin'ny orinasa mpamokatra entana aluminium fikarakarana bebe kokoa noho ny 10 taona, toy ny orinasa tsy fitsipika ara-nofo, aliminioma nohitsakitsahiko faritra, aluminium oxidation, hafanana hilatsaka, aluminium visy etc.
Inona ny tombontsoa sy ny filaminana dingana? Misy MOQ ilaina?
Tsy manome asa fanompoana ho an'ny aluminium OEM amin'ny orinasa fanodinana vola an toetra tsara indrindra. Ny dingana mba dia mandefa ny sary ho anay, ka dia fanadihadiana ny sary sy ny notsongaina ho anao miorina amin'ny TNR ianao takiana. (No MOQ ilaina, fa ny vidiny ho an'ny kely be ho ambony kokoa noho be dia be)
Nahoana no ny fiantohana ny kalitao ny vokatra fanaraha-maso?
Hanenjanana kokoa isika mihazona ny toetra avy mifehy tena voalohany ka hatramin'ny farany, ary mikendry amin'ny 100% fahadisoana maimaim-poana. Afaka mitaky ny fivarotana aorian'ny-mpanjifa raha misy olana. Baiko rehetra dia tokony ho nandeha namaky ny QC departemanta alohan'ny nandefa.
Ve ianao manome santionany? Moa ve sa fanampiny maimaim-poana?
Eny, afaka manolotra ny santionany maimaim-poana fiampangana nefa tsy mba mandoa ny vidin'ny entana, sy ny zava-kendren'ny naniraka santionany anao noho ny fanamarinana kalitao ny vokatra sy ny teknolojia dingana.
Ahoana no mety ho ny fomba raha mila manao ny nitranga fahiny?
Raha manana sary na santionany, Aza misalasala mandefa antsika, ka lazao anay ny fepetra manokana toy ny fitaovana, ny fandeferana, ambonin'ny fitsaboana sy ny vola ilainao.
Ahoana no an-tsambo ny vokatra? Mandra-pahoviana no fanaterana ny fotoana?
Ary ny santionany fanaovana, amin'ny ankapobeny dia tokony ho 5 ~ 10 andro, fa izany dia araka ny habetsahana sy ny vokatra mety complicated.We an-tsambo azy ireo DHL, EMS sns Fa ny lehibe mba hamokarana vokatra, isika dia an-tsambo azy ireo FOB , ny fanaterana ny fotoana dia mifototra amin'ny ny firenena tianao an-tsambo, fa ny tokotokony andro dia tokony ho 25 andro.
Aiza ny orinasa hita? Hataoko ahoana no mitsidika azy io?
Ny orinasa no misy ao amin'ny faritra Industrial Jiji, Shanghe Village, Wangniudun Town, Dongguan City, izay tanàna akaiky indrindra avy any Shenzhen, Guangzhou, Hong Kong.